24 June, 2019 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Maanta ayaa la filayaa in Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ahna Xarunta Maamulka Galmudug inay gaaraan Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Shalay gelinkii dambe ayaa waxaa Dhuusamareeb gaarayu Wafdi horudhac u ah safarka Ra’iisul Wasaaraha iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa,waxaana Maanta safarka Ra’iisul Wasaaraha looga dareemayaan Magalada Dhuusamareeb.
U jeedka safarka Ra’iisul Wasaaraha uu ku tagayo Dhuusamareeb ayaa waxaa lagu sheegay xaaladaha ka taagan Maamulka Galmudug iyo Go’aan ka gaarista sida ay ku dhici laheyd 4-da Bisha soo socota ee Kuly doorashada Maamulka Galmudug.
Waxaa Maanta siweyn loo adkeeyay Ammaanka Magalada dhuusamareeb,waxaana amaanka sugaya Ciidamada Maamulka Galmudug oo lagu xoojiyay Ciidamada DANAB ee xoogga dalka soomaaliyeed,kuwaas oo dhawaan la geeyay Magalada Dhuusamareeb.
Ciidamada ayaa baaritaano waxaa ay ku sameynayaan Gaadiidka isticmaalaya Xaafada Magalada Dhuusamareeb iyo kuwa soo gaya Magaaladaas,waxaana jira diyaar garoow ku aadan qaban qaabada soo dhaweynta wafdiga Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Warar kale oo soo baxaya ayaa waxaa ay sheegayan in Xildhibaano ka tirsan golaha Shacabka iyo Sanotero ay tagaan Magalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud si xal looga gaaro xaaladaha Galmudug.
the background of the new autonomy president Visits: 688022
What 9 World Leaders Were Doing in Their 20s Visits: 43651
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 38892
Saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab oo duqeyn lagu dilay + Magacyada Visits: 69